जरिवाना गर्दैमा गल्ति कम हुन्छ भन्ने हुंदैन | Yatra Khabar
Home अन्तर्वार्ता जरिवाना गर्दैमा गल्ति कम हुन्छ भन्ने हुंदैन
अन्जन कोईराला, प्रहरी निरीक्षक जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यँलय रुपन्देही
यस बर्ष ट्राफिक सप्ताह मनाउदै हुनु हुन्छ ट्राफिक सप्ताह को नारा के तय गर्नुभएको छ ?
दुर्घटना न्यूनिकरणलाई नै जोड दिएर सचेत रहौं दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऔं भन्ने नारा तय गरिएको छ ।
ट्राफिक सप्ताह मनाउनुको उद्देश्य के हो ?
ट्राफिक नियम सम्बन्धि जानकारी दिने निकाय छैन । कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता र चलन भएकोले ट्राफिक सम्बन्धि जानकारी दिन सकियो भने दुर्घटनालाई कम गर्न सकिन्छ की भनेर सप्ताहव्यापी कार्यक्रम मनाउन थालिएको हो । ट्राफिक सप्ताहबाट बढि भन्दा बढि मानिसहरुले ट्राफिक नियम सम्बन्धि जानकारी पाउन सकुन् भन्ने हाम्रो उदेश्य हो ।
सडकमा तिनसय पैसठ्ठी दिन खटिने ट्राफिक प्रहरीले सात दिन ट्राफिक सप्ताह मनाउंदैमा यहांहरुको उद्देश्य पुरा होला ?
पुरै उद्देश्य त पुरा हुंदैन तर केहि न केहि नियमित गर्ने भन्दा फरक भने पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । थोरै मानिसले पनि थप कुरा जाने भने अज्ञानताका कारण हुने दुर्घटना कम हुन सक्छन् र एउटा जानेका कुराहरु अरुलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने भावनको विकास भयो भने त्यसले सघाउ पु¥याउंछ भन्ने हो ।
ट्राफिक सप्ताह मनाउने क्रममा यहांहरुले कुन कुन वर्गलाई लक्षित वर्गको रुपमा छनोट गर्नुभएको छ ?
अहिलेको ट्राफिक सप्ताहमा तिन समुहलाई लक्ष्ँित गरेर कार्यक्रम तय गरिएको छ । एउटा सवारी धनी, चालक, सहचालक दोश्रो समुह विद्यालयका विद्यार्थी र तेश्रो समुहलाई समुदायका व्यक्तिहरुलाई लक्ष्ँित गरिएको छ । समुदायमा शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामिण क्षेत्रहरु छपिया, देवदह, धकधई लगायतका भित्री क्षेत्रका समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम संचालन भईरहेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीको आफ्नो समस्या के हो जुन कारणले दुर्घटना न्यूनिकरणमा कठिनाई उत्पन्न भएको छ ?
पहिलो कुरा त सवारी साधन चलाउने मान्छेको लाईसेन्स लिने प्रकृयामा क्लास लिईदिने दक्ष बनाएर सवारी चालक अनुमती पत्र बनाउन सघाउने संस्था कम छन् । दक्ष भएर लाईसेन्स लिने भन्दा पनि जसरीपनि लाईसेन्स लिनुपर्छ भन्ने समस्या छ । दक्ष भएर ट्राफिक नियम सिकेर लाईसेन्स लिनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास हुन सकेको छैन । तपाई सवारी चलाउन दक्ष हुनुभयो र ट्राफिक सम्बन्धि सबै ज्ञान भयो भने लाईसेन्स पाउनुहुन्छ भनेर बुझाउन सकिएको छैन । निजी क्षेत्रबाट ट्रायल र ट्राफिक नियम सिकाएर परिक्षा दिलाउने गरिएपनि सरकारी स्तरबाट त्यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन जसले गर्दा जांच दिएपछि जसरी पनि लाईसेन्स पाईन्छ भन्ने छ ।
रुपन्देहीको ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आउनुभएको छोटो समयमै एउटा महत्वकांक्ष्ँी कार्यक्रम शुरु गर्नुभएको छ अप्ठ्यारो भएको छैन ?
ट्राफिक सप्ताह मनाउनुलाई महत्वकांक्षी कार्यक्रम नभनौ सहज रुपमै भएको छ बरु आउंदा वित्तिकै काम गर्न पाउंदा राम्रँे अवसर मिले जस्तो लागेको छ । रेडक्रस संगको समन्वयमा मिलेर सबै सरोकारवालाहरु संग कार्यक्रम गर्ने अवसर जस्तै भएको छ । सबैको सहयोग मिलेको छ ।
ट्राफिक सप्ताह पछि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि कस्तो योजना बनाएको छ ?
मुख्य कुरा दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने दुईवटा उपाय हुन सक्छन् । एउटा जानेर गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्न सकिन्छ । अर्को नजानेर गरिएका गल्तिहरुलाई सचेत बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ । जुन अहिले जरिवाना गरिदै आईएको छ यो जानेर गल्ति गर्नेलाई जरिवाना गर्ने हो । तर नजानेर गल्ति गर्नेहरुलाई सचेत बनाएर जानकारी दिन सकियो भने त्यसले राम्रँे प्रभाव र उपलब्धि दिन सक्छ जसले दुर्घटना न्यूनिकरणमा पनि सघाउ पु¥याउंछ ।
सवारी साधनको संख्या बढेको बढ्यै छ, ट्राफिक प्रहरीको संख्या थपिएको छैन यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफ्नो कार्यकाल पुरा सफल बनाउन सक्छु भन्ने लाग्छ ?
यो वास्तविकता हो । संख्याकै हिसाब हेर्ने हो भने हरेक वर्ष १८÷१९ प्रतिशतले गाडीको संख्या थपिएको छन् । तर विगत पांच वर्षको ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दि हेर्ने हो भने करिब करिब एउटै छ बढेको छैन । तालिमप्राप्त दक्ष व्यक्ति ल्याउनुपर्छ भनेर माथिल्लो तहमा कुरा भएपनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन । अहिले तत्कालको अवस्थामा हामीलाई काममा अलि केहि प्रेसर छ ।
पछिल्लो समय सडकको नियम ट्राफिक नियम उलंघन गर्ने पैदलयात्रीलाई समेत कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि उठ्ने गरेको छ ट्राफिक प्रहरीले यसमा कस्तो सोंच बनाएको छ ?
काठमाण्डौ भित्र पैदलयात्रीलाई पनि जम्मा गर्ने सचेत बनाउने, जरिवाना काट्न शुरु भएको हो । बाहिर भने पैदलयात्रीलाई पनि जरिवाना गर्ने भन्ने शुरु भएको छैन । जसले सवारी साधन प्रयोग गरेको छैन उसलाई कारवाही गर्न पनि सहज छैन । बाटोको अवस्था त्यस्तै छ । एउटै बाटोमा पैदलयात्री सहित, ठूला सवारी साधन र रिक्सा साईकल समेत लैजानुपर्ने अवस्था छ । सडक चिन्हहरु पनि त्यहि किसिमको छ । बुटवल भैरहवाको सडक जुन अवस्थामा निर्माण भईरहेको छ यसले पनि पैदलयात्रीलाई गल्ति ग¥यो भने पनि कारवाही गर्न समस्या नै छ ।
सवारी चालकहरुले छाडा चौपायाको कारण दुर्घटनाको संख्या बढाएको छ यसको व्यवस्थापन हुन सक्यो भने दुर्घटनाका संख्या कम हुन सक्छन् भन्ने गरेको सुनिन्छ छाडा चौपायाको व्यवस्थापनको लागि के गर्न सकिएला ?
यो एकदम वास्तविक र हामी सबैले भोगेको कुरा हो । यसको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित क्षेत्रका नगरपालिकाले हेर्नुपर्ने हो । ट्राफिक प्रहरीले धेरैपटक सडकमा छोडिएका छाडा चौपाया नियन्त्रण गरेर विभिन्न गौशालामा पठाउने गरेको छ । तर फेरी पनि सडकमा उत्तिकै संख्यामा थुप्रिएका छन् । किसानहरु पनि आफै सचेत भएर आफ्ना बस्तुहरु सडकमा नछोड्नुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ पशु अधिकारकर्मीहरु पनि पशुलाई नथ्थी लगाउनु हुंदैनन् भन्छन् त्यसो गर्न पनि पाईएन । उठाएर लैजान पनि समस्या नै छ उचित स्थानमा लैजानु प¥यो । उनिहरुको खानपान, स्याहारसुसार भएको ठाउं हुनुप¥यो कहां लैजाने । रुपन्देहीमा रहेको एउटा गौशाला छ त्यसमा आवश्यक वस्तुको जोहो कस्ले गर्ने यी सबै समस्या छन् । अहिलेपनि दुई ट्रक भन्दा धेरै छाडा चौपाया छन् तर तिनलाई उठाएर लैजाने स्थान नहुंदा सम्म समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।
पछिल्लो समय सरकारले जरिवानाको दरलाई वृद्धि गरेको अवस्था छ विगतमा थोरै जरिवाना लिंदा पनि दवाव झेलेको ट्राफिक प्रहरीले फेरी अहिले बढाएको जरिवानाको दवाव झेल्न सक्ला ?
एकडेढ करोडको गाडी चढ्नेहरुलाई पांच सय, एकहजार रुपैया जरिवानाको हिसाबले ठूलो विषय होईन । तर जरिवाना गर्दैमा गल्ति कम हुन्छ भन्ने हुंदैन । गल्ति नगर्नलाई सचेत बन्नु जरुरी छ । गल्तिको रेकर्ड राख्न सरकारले ल्याउने भनेको स्मार्ट कार्ड सिस्टमको प्रयोग गर्न सके मात्र गल्तिको रेकर्ड रहने भएकोले गल्ति कम गर्न सकिन्छ । जहिले पनि पहिलो पटक गल्ति गरेको जस्तो हुंदा सम्म जरिवाना लिएर मात्र गल्ति कम हुन सक्दैनन् । जतिपटक गल्ति दोहोरिंदै जान्छन् त्यति नै पटक जरिवाना बढाउदै लगियो भने केहि हदसम्म समाधान हुन सक्ला । तरपनि सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ट्राफिक प्रहरीले सबैलाई जानकारी र सचेत बनाएको छ । यातायात व्यवसायी, सवारी चालक सबैलाई जानकारी गराएका छौं । जरिवानाको नयां दर लागु गर्ने समयमा केहि चुनौती त होला तरपनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र लागु गर्ने विषयमा हामी तयार छौं ।
अन्त्यमा सर्वसाधारणलाई के आग्रह गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा ट्राफिक नियम जान्नुपर्ने हो । जब मानिस हिड्न सक्ने हुन्छ त्यसपछि उसले सडक प्रयोग गर्छ र उसको मृत्यु भएपछि पनि त्यहि बाटोबाट नै घाट सम्म लगिन्छ । यसैले बाटोको सुरक्षित प्रयोग कसरी गर्ने, बाटो हामी सबैको हो । बाटो सबैले समान रुपले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ, ट्राफिक नियम आफुले पनि जान्ने र आफुले जानेका कुरा अरुलाई बुझाउंदै सबैले समान रुपले सडकको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।